Njikwa MIDI (Ihe Ọ Bụ na Otu esi emepe otu)
Kedu ikikere MIDI?
Otu esi emeghe, dezie, ma gbanwee MIDI faịlụ
Otu faịlụ nke .MID ma ọ bụ .MIDI nchịkọta faịlụ (akpọ "mid-ee") bụ faịlụ ihe odide Digital Musical.
N'adịghị ka faịlụ ọdịyo dị ka MP3 ma ọ bụ faịlụ WAV , faịlụ MIDI adịghị agụnye data ọdịyo kpọmkwem ma dị ntakịrị karịa. Dịka ọmụmaatụ, faịlụ MID na-akọwa ihe ederede na-akpọ na ogologo oge ọbụla ma ọ bụ nke ọ bụla ka ọ bụla.
Kama nke ahụ, ha bụ faịlụ ntụziaka na-akọwa otú a ga - esi mee ka ụda ahụ bụrụ ihe ejikọrọ na ngwaọrụ nrụghachị ma ọ bụ buru ibu n'ime usoro ngwanrọ nke maara otu esi akọwa nkọwa ahụ. Nke a na-eme ka MIDI faịlụ zuru oke maka ịkekọrịta ozi egwu n'etiti ngwa ndị yiri ya.
Ị nwere ike ịgụtakwu banyere ụdị mIDI na MIDI.org: Banyere MIDI.
Rịba ama: Otu faịlụ nwere mpịakọta faịlụ MID nwere ike ịbụ faịlụ DataInfo. Ị nwere ike imeghe otu na GDAL ma ọ bụ Pitney Bowes 'MapInfo.
Otu esi egwu MIDI faịlụ
A pụrụ ịmeghe faịlụ MIDI na Windows Media Player, QuickTime, Winamp, VLC, WildMidi, TiMidity ++, Composer NoteWorthy, Synthesia, MuseScore, Amarok, Apple's Logic Pro, ma yikarịrị ka ndị ọzọ na-egwu egwu ngwa ngwa. I nwekwara ike igwu faịlụ MIDI na netwọk Online.
Midi Sheet Music bụ usoro mmemme (ịkwesighi ịwụnye ya) nke nwere ike igwu faịlụ MIDI, kwa, ọ na-egosipụtakwa gị na mpempe akwụkwọ na oge dị ka egwu egwu. Ọ na-enyekwa gị ohere ịmegharị faịlụ MIDI na egwu egwu nke ị nwere ike ibipụta ma ọ bụ chekwaa na kọmputa gị dị ka PDF ma ọ bụ na faịlụ PNG ọtụtụ faịlụ.
Ndị MIDI dị ụtọ nwere ike igwu faịlụ MIDI na ngwaọrụ iOS ma ọ bụ nanị 75% nke faịlụ ahụ. Ị ga-akwụ ụgwọ iji mepee faịlụ ahụ dum. Ndị ọrụ Android nwere ike imeghe faịlụ MID na Player MIDI Player dị egwu ma ọ bụ MIDI Voyager Karaoke Player ngwa.
Ntuziaka: Ọ bụrụ na ịchọta na ngwa na PC gị na-agbalị imeghe faịlụ MIDI ma ọ bụ ihe na-ezighị ezi maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka usoro mmemme ọzọ mepụtara faịlụ MIDI, lee anyị Otu esi gbanwee Mmemme Nzuzo maka ntuziaka nchịkọta usoro maka ime mgbanwe ahụ na Windows.
Otu esi gbanwee Njikwa MIDI
FileZigZag bụ onye na- agbanwe ihe ntanetị nke na-enweghị ike iji tọghata MIDI faịlụ na MP3, WAV, AAC , FLAC , OGG , WMA , na ọtụtụ usoro ọdịyo ọzọ. A pụrụ iji ngwaọrụ ndị ọzọ iji tọghata faịlụ MIDI, nke ị nwere ike ịhụ na ndepụta nke Free Audio Converter Software Programs .
SolMiRe MIDI na MP3 Converter bụ ebe nrụọrụ weebụ ọzọ nke na-agbanwe MIDI faịlụ na MP3, ma ọ na-enye ụfọdụ nhazi ndị ọzọ adịghị na FileZigZag.
Enwere ike iji usoro egwu Midi nke elu mee ihe iji gbanwee faịlụ MIDI na egwu egwu.
Inyekwu Aka na MIDI faịlụ
Hụ Nweta Enyemaka Ndị Ọzọ maka ịmatakwu m na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ site na ozi-e, na-eziga na forum tech support, na ndị ọzọ. Mee ka m mara ụdị nsogbu ị na-enwe na imeghe ma ọ bụ na-eji faịlụ MIDI ma m ga-ahụ ihe m nwere ike ime iji nyere aka.
Ọ bụrụ na ị maralarị mepee mepee faịlụ nke Njikwa Digital Interface ma na-achọ ụzọ ị nwere ike ibudata faịlụ MIDI n'efu, gbalịa MIDIWORLD, FreeMidi.org, MIDI DB, Download-Midi.com, ma ọ bụ ELECTROFRESH.com.
Kedu ihe bụ MDW File?
Kedu ihe bụ KYS File?
Kedu ihe bụ HUS File?
Kedu ihe bụ XSD faịlụ?
Kedu ihe bụ AST File?
Kedu ihe bụ MPLS File?
Kedu ihe bụ MPK File?
Kedu ihe bụ CBU File?
Onye Pioneer VSX-530-K 5.1 Onye Ntanetị Ụlọ ihe nkiri
Ụdị ihe atụ maka Photoshop site Shelby Kate Schmitz
Ihe oyiyi na ibe weebụ gị
Ntuziaka di nkenke maka Ntaneti Nchebe Ntanetị na Network Network kacha mma
Otu esi achọta ulo gi na Google Street View
Ebe a na-agba ụgbọala nke ụgbọala: Heroes Unsung nke North Frozen
Egwuregwu Ndị Egwuregwu Egwuregwu Ọdachi (Xbox 360)
Ndị na-agbanwe agbanwe: Afọ nke oke: 3D Blu-ray Disc Review
"The Sims 2" PlayStation 2 Koodu Aghụghọ
Ọhụụ na-ahụ maka RoadWarrior 4D Duplex Mobile Scanner
Otu esi ele ihe nchoputa nile nke mail na Mac os X Mail
Vizio Co-Star na Gọgharia TV nke Google - Profaịlụ Foto
Dell Inspiron 15 (3537) Aka
Mmetụta Ndị Na-etinye na Kọmputa Igwe ojii
Chọpụta Ihe Igwe Igwefoto Gị gosipụtara Ihuenyo Na-egosi Gị
9 Google Chromecast Hacks iji mee ka ndụ dịkwuo mfe
Chọta Ngwá Ọrụ Ntanetị na Windows XP Akwụkwọ ederede
Ghichaa ma ọ bụ bipụta Mbido Macs Iji Jiri Disk Utility
Peel Back Sticker na Page Curl ma ọ bụ Dog Ear Effect in Illustrator